ဆောင်းပါး – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
637092 Views so far
ကမ္ဘာပေါ်က ထူးထူးခြားခြား ရယ်ချင့်စဖွယ် အဆောက်အအုံများ
ရေးသားသူ လင်းလက် မှ
ဇန်နဝါရီ 30, 2021 နေ့
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အရာတွေက နယ်ပယ်ကဏ္ဍတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။အဆောက်အအုံတွေဆိုရင် အတော်များများက သေသပ်လှပတာ၊ ခေတ်မီဆန်းပြားတာတွေနဲ့ အံ့အားသင့်စဖွယ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကိို မြင်ရလေ့ရှိကြပေမယ့် မြင်လိုက်တာနဲ့ မရယ်ရင်တောင်ပြုံးမိသွားစေမယ့် အဆောက်အအုံပုံစံတွေလည်း ဒီ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေကြတယ်ဆိုရင် အပြောနဲ့မယုံ၊ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့မှသာ ယုံနိုင်ကြမှာပါ။ ဒီကဏ္ဍ လေးမှာဖော်ပြသွားမယ့် ရယ်ချင့်စဖွယ်ထူးခြားအဆောက်အအုံတွေကတော့ မျက်လုံးနဲ့သာမြင်လို့သာယုံရပြီး တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေမှာလည်း အမှန်တကယ်တည်ရှိပြီး တကယ်တမ်းကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး မျက်မြင်ဒိဋ္ဌကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်တဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်ပုံစံ အ ဆောက်အအုံတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
Inntel Hotel Amsterdam-Zaandam
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အအုံကတော့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ အမ်စတာဒမ်မြို့မှာ တကယ်တမ်းဖွင့်လှစ် ထားတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံရဲ့မျက်နှာစာမှာ ဇန်းဒေသရဲ့ ရိုးရာအိမ်ပုံစံတွေကို ဒီဇိုင်း ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး အဝေးနေရာကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် လေထဲမှာ အိမ်တွေအလုံးလိုက် အစုလိုက်အပြုံ လိုက် ထပ်ဆင့်ထားသလိုလို၊ ပုံပြင်ကာတွန်းတွေထဲက မှော်မျှော်စင်အိမ်ကြီးလိုလို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ဒါကသဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ထားတဲ့နေရာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ အော်လန်ဒိုမြို့က ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်နေရှာတဲ့ ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္ထဝင် ဗိသုကာဟန်ကိုမှ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်လုပ်ထားတဲ့ Wonderworks ပြတိုက်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အထပ်သုံးထပ် ပါရှိပြီး ၈၂ ပေမြင့်တဲ့ ဒီအဆောက်အအုံက သူရဲ့တြိဂံပုံစံမျက်နှာစာမြင်းမိုရ်ပိတ်က မြေပြင်နဲ့ထောက်ပြီး ပြတိုက်ရဲ့ ထောင့်တစ်ဖက်က ၂၀ ရာစုနှစ်ပုံစံ အုတ်စီကုန်လှောင်ရုံပေါ် ဖိထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ထန်းပင်ပုလေးတွေနဲ့ လမ်းမီးတိုင်တွေကိုလည်း ဇောက်ထိုးနဲ့တန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့ပုံမျိုး ဖန်တီးထည့်သွားထားပါသေးတယ်။ ထင်မှတ် မထားလောက်အောင်ကိုမှ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံး ပက်လက်လှန်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံက ပြ တိုက်ထဲဝင်ကြည့်ချင်အောင်ကို ဆွဲဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြတိုက်ထဲမှာတော့ တစ်နာရီ ၆၅မိုင်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအကြောင်း၊ ၅ဒသမ၂မဂ္ဂနီကျုရှိတဲ့ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအကြောင်းနဲ့ တိုက်တန်းနစ်ပြခန်းတွေကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအဆောက်အအုံရဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူကများ ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းဖန်တီးပေးလိုက်တာလဲ ဆိုပြီး သိချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျိန်းသေပြောရဲပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိုဟိုင်းယိုး ပြည်နယ်၊ နယူးအာ့ခ်မြို့အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Longaberger မှာ လုပ်ကိုင်ကြသူတွေက ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉ရခုနှစ်ကြားမှာ NBBJ နဲ့ Korda Nemeth Engineering အဖွဲ့တို့က ဒီဇိုင်းပုံစံအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်နဲ့ရက်တဲ့ သစ်ဝါးခြင်းတောင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ လက်မှုကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများ ဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ဒီဇိုင်းကိုမှီငြမ်းကာ ကုမ္ပဏီဌာနချုပ်ရုံးအဖြစ် ဒီဇိုင်းဖန်တီးတည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသာမန်ခြင်းတောင်းထက် အဆပေါင်းများစွာပိုမိုကြီးမားပြီး ခုနှစ်ထပ်မြင့်တဲ့ ခြင်းတောင်ပုံအဆောက်အ အုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ပျော်ပွဲစားထွက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားစေလောက်အောင် ဆွဲ ဆောင်နိုင်တဲ့အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးက စတုရန်းပေ ၁၈၀၀၀၀ ရှိတာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အအုံရဲ့အမြင့်က ၁၉၆ ပေရှိပြီး အောက်ခြေမှာ ၁၉၂ ပေ x ၁၂၆ ပေ ရှိကာ အဆောက်အအုံရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ၂၀၈ ပေ x ၁၄၂ ပေ ရှိနေတာပါ။ ဘယ်လိုပဲတွေးတွေး အဆောက်အအုံတစ် ခုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က ခြင်းတောင်းပုံစံမျိုးတည်ရှိနေတာကိုက ထူးဆန်းအ့ံအားသင့်ဖွယ်ကောင်းလှပြီး ဒီအဆောက် အအုံထဲမှာ အလုပ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်း ခြင်းတောင်းထဲမှာဝင်နေရတဲ့ ငလက်မလေးတွေလို ထူးခြား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုး ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
The Amazing Smith Mansion in Wyoming
အမရေိကနနွိုငငွံ၊ ဝိုငယွိုမငပွှညနွယွ၊ ဝါပီတီတောငကွှားမှာတညရွှိတဲ့ Smith Mansion ဆိုတဲ့ ဒီအိမွ ကှီး ကတော့ ၁၉၇၃ခုနှစမွှာ အငဂွငှနွီယာပညာရပကွို စှဲလမွးရူးသှပတွဲ့ ဆောကလွုပရွေးသမား ဖရနွ့စစလွီ စမစကွ စတငတွညဆွောကခွဲ့တာဖှစပွှီး ၁၉၉၂ခုနှစမွှာ ခေါငမွိုးပေါကွပှုတကွသှဆေုံးသှားခှိနထွိ မရပမွနားဘဲ တဖှညွးဖှညွးခငွှး စိတကွှိုကတွညဆွောကထွားခဲ့တဲ့အိမကွှီးဖှစပွါတယွ။ ဒီအိမကွှီးကို သူ့မိသားစုအတှကွ ရညွ ရှယပွှီး ဆယစွုနှစနွှစခွုကှာနီးပါး တညဆွောကခွဲ့တာဖှစပွါတယွ။ အဆောကအွအုံပုံစံတှမရှေိဘဲ သူ့စိတကွူးက လမွးညှှနတွဲ့အတိုငွး တညဆွောကခွဲ့တာဖှစပွါတယွ။ Modern Arts & Crafts အိမကွှီးလို့လညွးခေါဆွိုနိုငပွှီး စကကွိရိယာတှအမှေားကှီးအသုံးပှုဘဲ လကဖွှစနွဲ့သာအဓိကဖနတွီးတညဆွောကခွဲ့တဲ့ မောဒွနအွနုပညာတစွ ခုအဖှစွ ယနေ့ခှိနထွိ ကနှရွှိနဆေဲဖှစပွါတယွ။ ဆောကလွုပခွှိနမွှာအသုံးပှုခဲ့တဲ့ သစတွှကရကေတွဲလစွနိတခွွ တောငကွ ခုတယွူရရှိတဲ့သစတွှဖှစပွှေီး တစခွှို့သစလွုံးတှကေ ဒသတှငွေးမီးလောငထွားတဲ့နရောတှကနေေ ကောငွးနိုးရာရာကိုရှေးကောကယွူပှီး ပှနအွသုံးပှုထားတာဖှစပွါတယွ။ ဒီအိမကွှီးက တောငကွှားအလယမွှာ ရ၅ ပကှေောွ ထီးထီးမားမားမှငွ့မားနတောကို မှငတွှေ့ရမှာဖှစပွါတယွ။ Smith Mansion ထိနွးသိမွးရေးစီမံကိနွး က ဒီအိမကွှီးအရှညတွညတွံ့နစပှေေီး ခရီးသှားတှကေိုဆှဲဆောငတွဲ့ ဒသတှငွေးဆနွးပှားတဲ့အလညအွပတနွေ ရာအဖှစသွာမက သူရဲ့အိမကွိုနောကဆွုံးထှကသွကအွထိ စှဲစှဲလမွးလမွးကှိုးပမွးတညဆွောကသွှားခဲ့သူ စမစွ ရဲ့လကရွာကို လေ့လာနိုငမွယွ့ ပှတိုကအွဖှစပွါ ဆကလွကထွိနွးသိမွးပေးထားပါတယွ။
Air Travel in the Space Age
အာကာသခေတ်အရုဏ်ဦးကာလ အဆောက်အအုံကြီးသဖွယ်အလား တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီအ ဆောက်အအုံကြီးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာ တည်ရှိ တာပါ။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် LAXရဲ့ လည်ပတ်စရာအဆောက်အအုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်ကြေးဒေါ်လာ ၂ဒသမ၂သန်းရှိတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးဖြစ်ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက အနာဂတ်ကာလပုံစံ ထင်ရှားတဲ့အထင်ကရအဆောက်အုံ လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လော့စ်အိန်ဂျလိ်စ်မြို့ကို ဂြိုဟ်သားတွေရွေးချယ်ဆင်းသက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ် ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်အာကာသယာဉ်သဖွယ် အဆောက်အအုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် လမှာ ပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၁၂ဒသမ၃သန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်မြင်ကွင်းကို ၃၆၀ ဒီဂရီပတ်လည်မြင်ရတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်စေခဲ့ပြီး ၁၃၅ ပေ မြင့်တဲ့အမိုးကိုင်းတွေနဲ့ ဝေါ့ဒစ္စနေးစိတ်ကူးပညာရှင်များအ ဖွဲ့ WDIရဲ့ အပြင်ဘက်မီးအလှဆင်မှုတွေလည်း ပေါင်းစပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်က ဖွင့်ဖြစ်လိုက်၊ ပြန်ပိတ်သွားလိုက်နဲ့ပါပဲ။ စျေးကြီးတဲ့လေဆိပ်ဘာဂါတွေရောင်းရင်တောင်မှ ဒီ အဆောက်အအုံကြီးရဲ့ စရိတ်ကိုမကျေနိုင်လောက်ပါဘူး။
Lucy the Elephant in New Jersey
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်က ဆင်ပုံအဆောက်အအုံကတော့ အတ္တလန္တိတ်မြို့အနီးနားမှာ တည်ရှိတဲ့အမျိုးသားသမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဗီလပ်ဖာတီက ၁၈၈၁ ခုနှစ်မှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အထပ်ခြောက်ထပ်ပါရှိတဲ့ သံဖြူကာ သစ်သားအဆောက်အ အုံဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခံရဖို့ မူလရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ရုံးခန်းနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေရာတွေအဖြစ်လည်း အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေ အများစုက သူတို့ရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို ထင်ဟပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ အဆောက်အအုံတွေကိုဖန်တီးလေ့ရှိကြပေမယ့် လပ်ဖာတီကတော့့ ဆင်တွေကိုရောင်းချတဲ့ကုန်သည်မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ခြံမြေတွေရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာ ဖြစ်ပြီး လမ်းကဖြတ်သွားရုံနဲ့ မြင်နေရတဲ့ ဆင်ရုပ်ကြီးက လူနေလို့ရတဲ့အဆောက်အအုံကြီးဆိုတာက တကယ့်ကို ထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေပြီး သူရဲ့လုပ်ငန်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အကျိုးရှိသွားစေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးနေရာ ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပြီး အပြင်ကိုထွက်ပြူကြည့်လို့ရပါတယ်။
Free Spirit House in British Columbia, Canada
ဒီအဆောက်အအုံကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ဘရစ်တစ်ရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်မှာ တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ၊ တောင်ကုန်းတွေနဲ့ အခြားမျက်နှာပြင်တွေမှာ တွဲလောင်းခိုနေတဲ့ စက်လုံးပုံသစ်အိမ်လေးတွေပဲဖြစ် ပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက် သစ်ပင်အိမ်ဖြစ်ပြီး တွမ်ချူလေ့ဖ်က တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ အိမ်တစ်လုံးချင်း စီကို စက်လုံးပုံစံသစ်အိမ်တွေအဖြစ် လက်နဲ့ထွင်းထားပြီး သစ်ပင်နဲ့ အမြင့်နေရာတွေကနေ ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆွဲထားရ တာပါ။ အဝေးကကြည့်လိုက်ရင် သစ်ပင်မှာတွဲလွဲခိုနေတဲ့ သစ်ကြားသီးလိုလို၊ သစ်သီးလိုလိုလေး မြင်တွေ့ရပါ တယ်။ ဒီအိမ်ထဲကို ၀င်ဖို့ ကြောင်လိမ်လှေကားလေးကနေ ဒါမှမဟုတ် ကြိုးတံတားလေးကနေ လာလို့ရပါတယ်။ လေတိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထဲမှာ လူတစ်ယောက်လှုပ်ရှားရင် ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ချိတ်ဆွဲအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အိမ်လေးမှာ တည်းခိုအနားယူလို့ရသလို ပုံစံတူစက်လုံးပုံသစ်အိမ်ကို ၀ယ်ယူပြီး ကိုယ်ပိုင်ခြံ သို့မဟုတ် ကိုယ့်အိမ် ဘေးက သစ်ပင်မှာ ချိတ်ဆွဲအသုံးပြုလို့လည်း ရပါတယ်။
Pod House in New York State
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ရိုချက်စတာမြို့အနီး ပေါင်ဒါမေးလ်ဥယျာဉ်မှာ ဒေသခံတော ပန်းလေး Queen Anne’s Lace ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမှီငြမ်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ မှိုပွင့်လေးနဲ့ လည်းဆင်တူတဲ့ ဒီအိမ်ကို ဗိသုကာ ဂျိမ်းစ်အိတ်ချ်ဂျွန်ဆင်က ဒီဇိုင်းဖန်တီးတည်ဆောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မှိုပွင့်လေးတွေလိုအိမ်ခန်းလေးတွေကို အပြင်ဘက်လျှောက်လမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ သ ဘာဝအပင်ငယ်ပုံစံမျိုးကို မှီငြမ်းဖန်တီးထားတဲ့ အိမ်ပုံစံဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး တောအုပ်လေးထဲက တောတွင်းသားလိုမျိုး ခံစားရစေမယ့် အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တန်နက်ဆီပြည်နယ်က ဟိုရေ့စ်ဘာဂတ်စ်ဆိုသူ ဗိသုကာအမြင်ရှိသူအမျိုးသားက လည်း သူရဲ့စွဲလမ်းမှုဝါသနာကြီးတဲ့အတိုင်း အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းရင်းကနေ ကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံး သစ်ပင် အိမ်ကြီးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အဆောက်အအုံပုံစံမပါဘဲနဲ့ သစ်ပင်အိမ်ကြီးကို ၁၉၉၃ခုနှစ်ကနေ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဂတ်စ်ရဲ့သစ်ပင်အိမ်ကြီးဆီ ကို ခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်တစား လည်ပတ်လာခဲ့ကြပြီး မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဆောက်အအုံအဖြစ် ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ဒီအိမ်ကြီးဆီကို လည်ပတ်နေထိုင်ခွင့် ပိတ်သိမ်းစေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
A Weird House in the Alps
သာယာငြိမ်းအေးလှတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ အပ်စ်တောင်တန်းပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ရေအိုးတစ်လုံးလို့ထင်ရတဲ့ အဆောက်အအုံပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြား ဆန်းပြား ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင် အိမ် ၁၀ လုံးမှာ အမြဲပါလေ့ရှိတဲ့အိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တောင်စောင်းမှာတင်နေတဲ့ ကျောက်ခဲလုံးလေးနဲ့ ဆင်တူပြီး အိမ်ထဲမှာနေထိုင်သူအတွက် လုံခြုံမှုအပြည့်အဝနဲ့ အေးဆေးသက်သာနေလို့ရ စေမယ့် အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Beer Can House in Houston, Texas
ဘီယာဘူးခွံတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ ဒီအိိမ်ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဟူစတန်မြို့ က ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်မေကိုဗစ်ရှ်ဆိုတဲ့ အငြိမ်းစားမီးရထားဝန်ထမ်းတစ်ဦးက သူရဲ့အိမ်ကို ဘီယာဘူးခွံတွေနဲ့ ၁၈ နှစ်ကြာအချိန်ယူအလှဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကနေ အငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တစ်နေ့ကို ဘီယာ ၆ ဘူးပါ တစ်ကတ်ပုံမှန် ၀ယ်သောက်ဖြစ်နေခဲ့တာကနေ ဘီယာဘူးခွံတွေနဲ့ ၁၈ နှစ်ကြာမြင့်တဲ့ အိမ်မွမ်းမံရေးစီမံ ကိန်းကြီး အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်က ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ ရဲ့ဘီယာဘူးခွံအိမ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းထားပြီး အကျိုးမမျှော်ကိုးတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Orange Show Center for Visionary Art က လက်ရှိမှာ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Ref : https://www.thoughtco.com
ဆောင်းပါးများ 131 post
ဈေးဝယ်လမ်းညွှန် 33 post
ဆောင်းပါး 32 post
အင်တာဗျူး 17 post
Content Partner9post
Uncategorized6post
သတင်းနှင့် ပြပွဲများ0post
မိသားစုအတွက် နွေးထွေးစေမယ့် အိမ်ကလေး
၂၀၂၁ မှာ ဖုန်းရွှေကောင်းပြီး လာဘ်ပွင့်စေဖို့
အခန်းကျဉ်းမှ အခန်းကျယ်သယောင် အလှဆင်နည်း
2021 စုစုပေါင်း 12 ပုဒ် ရှိသည်
1 ပုဒ် ဧပြီ
2 ပုဒ် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ
9 ပုဒ် ဇန်နဝါရီ
2020 စုစုပေါင်း 86 ပုဒ် ရှိသည်
10 ပုဒ် ဒီဇင်ဘာ
7 ပုဒ် နိုဝင်ဘာ
10 ပုဒ် အောက်တိုဘာ
1 ပုဒ် ဩဂုတ်
11 ပုဒ် ဇူလိုင်
7 ပုဒ် ဇွန်
8 ပုဒ် မေ
2 ပုဒ် ဧပြီ
8 ပုဒ် မတ်
13 ပုဒ် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ
2019 စုစုပေါင်း 80 ပုဒ် ရှိသည်
6 ပုဒ် ဒီဇင်ဘာ
9 ပုဒ် နိုဝင်ဘာ
9 ပုဒ် စက်တင်ဘာ
9 ပုဒ် ဩဂုတ်
4 ပုဒ် ဇူလိုင်
3 ပုဒ် ဇွန်
2 ပုဒ် မေ
9 ပုဒ် ဧပြီ
2 ပုဒ် မတ်
5 ပုဒ် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ
12 ပုဒ် ဇန်နဝါရီ
2018 စုစုပေါင်း 66 ပုဒ် ရှိသည်
4 ပုဒ် ဒီဇင်ဘာ
6 ပုဒ် နိုဝင်ဘာ
9 ပုဒ် အောက်တိုဘာ
4 ပုဒ် စက်တင်ဘာ
8 ပုဒ် ဩဂုတ်
7 ပုဒ် ဇူလိုင်
1 ပုဒ် ဇွန်
4 ပုဒ် မေ
7 ပုဒ် ဧပြီ
10 ပုဒ် မတ်
1 ပုဒ် ဇန်နဝါရီ
2017 စုစုပေါင်း 59 ပုဒ် ရှိသည်
3 ပုဒ် စက်တင်ဘာ
2 ပုဒ် ဩဂုတ်
19 ပုဒ် ဇွန်
14 ပုဒ် မေ
၁၅ ကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီး
ရေးသားသူ Home & Deco အဖွဲ့သားများ မှ
ဒီဇင်ဘာ 7, 2020 နေ့
Content Partnerဆောင်းပါး ကဏ္ဍတွင်
၁၅ ကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် အရှေ့တောင်အာရှ အိမ်ခြံမြေစျေးကွက် ၁၄ ခု၊ တရုတ်ဒေသများဖြစ်သော တရုတ်ပြည်မ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအို၊ ဩစတြေးလျ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန် အစရှိသည့် နိုင်ငံနှင့် ဒေသများမှ ထူးချွန်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများကို ရွေးချယ်ကာ ဒေသတွင်းအကောင်းဆုံး ဆုကြီးများကိုချီးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် “အာရှ၏အကောင်းဆုံး” များအဖြစ် ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းများထက် သာလွန်ထင်ရှားစေခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်၏ PropertyGuru Asia Property Awards စီးရီးတွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ထူးချွန်ဆုများ ဆွတ်ခူးထားခဲ့သူ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၈၇ ခုခန့်သည် ဆုအမျိုးအစား ၃၅ ခုအတွက် ဒေသတွင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါဆုများတွင် ယခင်က တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ချီးမြှင့်ဖူးခြင်း မရှိသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆုများဖြစ်သော အကောင်းဆုံးဘက်စုံသုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ)၊ အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ)၊ အကောင်းဆုံး လူနေမှုပုံစံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ)၊ အကောင်းဆုံး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ)၊ အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) နှင့် အကောင်းဆုံး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်သစ်ဆု (အာရှ) အစရှိသည့်ဆုများ ပါဝင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ Capital Development Ltd. က အကောင်းဆုံး စီးပွားရေးသုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) ကို ပြတ်သားစွာ ရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့၌ Meeyahta Development Limited ကဆောက်လုပ်သော Yoma Central စီမံကိန်းကလည်း အကောင်းဆုံး လက်လီလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေးဆု (အာရှ) ကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်စင်တာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်တွင် မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်များ ဆုရယူနိုင်ခြင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်နေသည့် အားအင်တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဒေသတွင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု သုံးဆုကို ရယူသွားသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ၁၅ ကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် ဆုအရေအတွက်အများဆုံး ဆွတ်ခူးသွားသည့် နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ GuocoLand သည် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် အတောက်ပဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့ပြီး အဓိကဆုကြီးဖြစ်သည့် အကောင်းဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) အပါအဝင် ၎င်း၏ Guoco Midtown နှင့် Wallich Residence စီမံကိန်းများအတွက် အကောင်းဆုံး ဘက်စုံသုံး ဆောက်လုပ်ရေးဆု (အာရှ) နှင့် အကောင်းဆုံးကွန်ဒိုဆု (အာရှ) တို့ကို အသီးအသီး ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ Aurum Land (Private) Limited သည် အကောင်းဆုံး ခေတ်မီလှပသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) ကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့သလို ၎င်း၏ The Hyde စီမံကိန်းသည်လည်း အကောင်းဆုံး အထပ်မြင့်ကွန်ဒိုဗိသုကာဒီဇိုင်း (အာရှ) ကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသတွင်း ကုမ္ပဏီ ၇ ခုကို ကျော်၍ Wing Tai Asia သည် အကောင်းဆုံး လူနေမှုပုံစံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) ကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
Soilbuild Group Holdings Ltd ကဆောက်လုပ်သော Solaris @ Tai Seng သည် အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးဆု (အာရှ) နှင့် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစိမ်းလန်းအဆောက်အဦဆု (အာရှ) တို့ကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါသည်။ Qingjian Perennial (Bukit Timah) Pte Ltd က ဆောက်လုပ်သော Forett at Bukit Timah ကလည်း အကောင်းဆုံး အထပ်နိမ့်ကွန်ဒို ရှုခင်းဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကို ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှရရှိသော ဆုအရေအတွက်စုစုပေါင်းသည် ကိုးဆုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အကောင်းဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) ကို PT Jababeka Tbk ကလည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်သစ်ဆု (အာရှ)ကို PT Urban Jakarta Propertindo, Tbk ကလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည်လည်း ဒေသတွင်းဆုကြီး ၈ ခုအထိ ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါသည်။ Agung Sedayu Group က ၎င်းနှင့် Salim Group တို့ ပူးတွဲတည်ဆောက်ထားသော PIK2Sedayu Indo City စီမံကိန်းအတွက် အကောင်းဆုံး မြို့နယ်ပင်မစီမံကိန်းဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) နှင့် HARRIS Suites Puri Mansion စီမံကိန်းအတွက် အကောင်းဆုံးဟိုတယ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကို ကိုရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
Bali နှင့် Lombok ကျွန်းတို့မှ အကောင်းမွန်ဆုံး စီမံကိန်းအချို့တို့ကလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက် ဒေသတွင်းဆုကြီးအချို့ကို ဆွတ်ခူး ပေးသွားခဲ့ပါသည်။ အကောင်းဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးဆု (အာရှ) ကို Invest Islands ၏ Torok Hill Resort အပန်းဖြေစခန်းကလည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံးဘက်စုံသုံးဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကို PT Indonesian Paradise Property Tbk ၏ Sahid Kuta Lifestyle Resort အပန်းဖြေစခန်းကလည်းကောင်း ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ စီမံကိန်းများသည်လည်း ရှုခင်းဗိသုကာဒီဇိုင်းကဏ္ဍတွင် ဆုတံဆိပ်များ ရယူနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ SwanCity and Mitsubishi Estate Residence မှဆောက်လုပ်သော Daisan စီမံကိန်းသည် အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကို ရရှိခဲ့ပြီး Ariobimo Laguna Perkasa က ဆောက်လုပ်သော Senayan Park သည် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှုခြင်းဗိသုကာဒီဇီုင်းဆု (အာရှ) ကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှဆွတ်ခူးသွားသော ဒေသတွင်းဆုကြီး ၅ ခုအနက်မှ တစ်ဆုအနေဖြင့် L.P.N. Development PCL. သည် အကောင်းဆုံး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) ကိုရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသည့်ဆုကြီးများအနက်မှ ၂ ခုကို Habitat Group ကဆောက်လုပ်သော Walden Thonglor 8 က အကောင်းဆုံး အထပ်နိမ့်ကွန်ဒိုဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကောင်းဆုံးကွန်ဒိုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ဖြင့်လည်းကောင်း ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ Kasemsubsiri Co., Ltd. ကဆောက်လုပ်သော The PARQ ကလည်း အကောင်းဆုံး ရုံးခန်းအဆောက်အဦဆု (အာရှ) နှင့် Idea Development ကဆောက်လုပ်သော Istani Villas က အကောင်းဆုံးအိမ်ရာအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) တို့ကို ရယူသွားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၅ ကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သည့် PropertyGuru အမှတ်သညာဆုကို DTGO ၏ Executive Committee မှ ဥက္ကဌ၊ MQDC ၏ Executive Committee မှ ဥက္ကဌ နှင့် Buddharaksa Foundation ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Thippaporn Ahriyavraromp (Chearavanont) ကရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ Thippaporn Ahriyavraromp သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တစ်နှစ်တာ အိမ်ခြံမြေပုဂ္ဂိုလ်ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့ဖူးပြီး ဤဆုကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
Ecopark Corporation Joint Stock Company မှဆောက်လုပ်သော Ecopark Tourism and Trade Urban Area သည် ဒေသတွင်း အခြားစီမံကိန်းကြီး ၇ ခုကိုကျော်လွန်၍ အကောင်းဆုံးမြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဆု (အာရှ) ကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါသည်။ ဤဆုသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ရယူသွားသော ဒေသတွင်းဆုကြီး သုံးခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြားနှစ်ဆုမှာ Kien A Corporation ကဆောက်လုပ်သော Alila Bai Om ကဆွတ်ခူးသွားသည့် အကောင်းဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) နှင့် Gamuda Land HCMC JSC က ဆောက်လုပ်သော Diamond Century ကဆွတ်ခူးသွားသည့် အကောင်းဆုံး အထပ်မြင့်ကွန်ဒို ရှုခင်းဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
မကြာသေးမီက ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် PropertyGuru Asia Property Awards (တရုတ်ပြည်မ၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို) ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးတွင် ဆုရရှိခဲ့သူ Shimao Group Suhu Branch က အကောင်းဆုံးဘက်စုံသုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆု (အာရှ) ကိုရရှိခဲ့ပြီး Bluetown Architects က ဆောက်လုပ်သော Peach Blossom Future Villa (အဆင့် ၂) က အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကို ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် တရုတ်ပြည်မမှဆွတ်ခူးသည့် ဆုအရေအတွက်မှာ ၂ ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဟောင်ကောင်ကလည်း Henderson Land Group က ဆောက်လုပ်သော2Murray Road စီမံကိန်းက အကောင်းဆုံးရုံးခန်းဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကို ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်းဆုကြီးတစ်ဆု ရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ ပါသည်။
Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd ကဆောက်လုပ်သော Urban Village and Factory Phnom Penh ဖြင့် အကောင်းဆုံးစုပေါင်း အလုပ်လုပ်ရန်နေရာဆု (အာရှ) ကိုလည်းကောင်း၊ Peng Huoth Group ကဆောက်လုပ်သည့် PH Eco Mall က အကောင်းဆုံးလက်လီလုပ်ငန်း ဗိသုကာဒီဇိုင်းဆု (အာရှ) ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကလည်း ဒေသတွင်းဆုကြီး ၂ ဆုကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဩတြေးလျ၊ မလေးရှားနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ကလည်း ဒေသတွင်းဆုကြီး တစ်ဆုစီကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဩတြေးလျနိုင်ငံမှ THIRDi Group ကဆောက်လုပ်သော Paragon of Pyrmont က အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တရုတ်ပြည်မမှ စီမံကိန်း ၉ ခုကိုကျော်လွန်၍ အကောင်းဆုံးအိမ်ရာဆု (အာရှ) ကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ မလေးရှားမှ IPark Development Sdn. Bhd. ကဆောက်လုပ်သော i-Park @ Senai Airport City က အကောင်းဆုံး စက်မှုဇုန်ဆောက်လုပ်ရေးဆု (အာရှ) ကိုလည်းကောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်မှ Damosa Land, Inc. ကဆောက်လုပ်သော Agriya က အကောင်းဆုံးအိမ်ရာစိမ်းလန်းအဆောက်အဦဆု (အာရှ) ကိုလည်းကောင်း အသီးသီးရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့်ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးမတိုင်မီ PropertyGuru Asia Property Awards (အိန္ဒိယ) နှင့် PropertyGuru Asia Property Awards (Greater Niseko ဒေသ) ဆုပေးပွဲများကိုလည်း အဆိုပါဒေသများတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
PropertyGuru Asia Property Awards (အိန္ဒိယ) တွင် Brookfield Properties က အကောင်းဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်သစ်ဆု အပါအဝင် ဆုကြီး ၃ ခု ဆွတ်ခူးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆုအရေအတွက်အများဆုံး ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ Gurugram မြို့ရှိ IT SEZ ဖြစ်သော Candor TechSpace စီမံကိန်းသည် အကောင်းဆုံး ရုံးခန်းအဆောက်အဦဆုနှင့် အကောင်းဆုံးစိမ်းလန်းအဆောက်အဦဆုတို့ကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် PropertyGuru Asia Property Awards (Greater Niseko ဒေသ) ဆုပေးပွဲကြီးတွင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာကျော် Alpine အပန်းဖြေစခန်းများရှိရာဒေသမှ ထူးချွန်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဂုဏ်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ Niseko Alpine Developments Co Ltd. သည် The Vale Rusutsu အတွက် အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရေးဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ Greater Niseko ဒေသတွင် အခြားထင်ရှားသည့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Temak Treehouse KK ကလည်း အကောင်းဆုံးခေတ်မီလှပသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
၁၅ ကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးသည် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် PropertyGuru Asia Property Awards (တရုတ်ပြည်မ၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို) ဆုပေးပွဲဖြင့် စတင်ခဲ့သော 2020 PropertyGuru Week အိမ်ခြံမြေရက်သတ္တပတ်အတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် အခမ်းအနားကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤရက်သတ္တပတ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ဆဌမအကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia အိမ်ခြံမြေညီလာခံလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဤညီလာခံတွင် အိမ်ခြံမြေနှင့် အိမ်ခြံမြေနည်းပညာကဏ္ဍမှ အထက်မြက်ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များကို စုစည်းပေးခဲ့ပါသည်။
PropertyGuru Asia Property Awards ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှ ထိပ်တန်း အိမ်ခြံမြေနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယင်းအချိန်မှစ၍ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်များကို တရုတ်ပြည်မ၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ဩစတြေးလျ၊ အရှေ့တောင်အာရှ (အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ မော်လ်ဒိုက်) နှင့် ဂျပန် (Greater Niseko ဒေသ) တို့အထိ ချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ် ၁၅ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
PropertyGuru Group ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Hari V. Krishnan က “အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ PropertyGuru Asia Property Awards ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အစီအစဉ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ အာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ဝှမ်းက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်မယ့် လေးစားဖွယ်၊ ယုံကြည်ဖွယ် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုပေးပွဲအစီအစဉ်ကြီးဟာ ယခုလို စိန်ခေါ်မှုမြင့်မားတဲ့ ကာလမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ အပြန်အလှန်ပါဝင်နိုင်တဲ့ ပုံစံများနဲ့ ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ရုံသာမကဘဲ ၁၅ နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နှစ်မှာ အရှေ့တောင်အာရှအပြင်က အခြားသော စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နိုင်ငံများအထိပါ ဖြန့်ကျက်နိုင်တာကို တွေ့ရတာ အင်မတန်မှ ကျေနပ်စရာပါ။ ဒါတွေထက်ပိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူမိတဲ့အရာကတော့ ဒီအစီအစဉ်ဟာ အာရှနိုင်ငံများမှာ နေထိုင်လျက် ရှိသူတွေကို အရည်အသွေးမြင့် အိမ်ခြံမြေရွေးချယ်စရာတွေအကြောင်း သိရှိအောင် စွမ်းဆောင်ထားနိုင်သလို လူတိုင်း အိမ်လို့ခေါ်နိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကတိကဝတ်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်အတွက် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်း ဆုရရှိသူများကို သက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်များမှ ခေါင်းဆောင်အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများပါဝင်သော အမှီအခိုကင်းသည့် အကဲဖြတ်အဖွဲ့က ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအကဲဖြတ်အဖွဲ့တွင် Jones Lang LaSalle Philippines, Inc. (Philippines) မှ Country Head ဖြစ်သူ Christophe Vicic ၊ PTI Architects (Indonesia) မှ Managing Director ဖြစ်သူ Doddy A. Tjahjadi ၊ SPARK Architects (Singapore) မှ Partner ဖြစ်သူ Lim Wenhui ၊ Inhabit Group (Australia) မှ ဩစတြေးလျအနောက်ပိုင်း Regional Manager ဖြစ်သူ Lui Violanti ၊ Macao Association of Building Contractors and Developers (Hong Kong and Macau) မှ Board of Directors ၏ President ဖြစ်သူ Paul Tse ၊ Jones Lang Wootton (Malaysia) မှ Deputy Managing Director ဖြစ်သူ Prem Kumar ၊ Emerson Real Estate (Myanmar) မှ Managing Director ဖြစ်သူ Richard Emerson ၊ Key Real Estate Co., Ltd (Cambodia) မှ Founder နှင့် Director ဖြစ်သူ Sorn Seap ၊ Tospur Real Estate Consulting Co., Ltd. (Mainland China) မှ Chairman ဖြစ်သူ Sun Yigong ၊ JLL Thailand (Thailand) မှ Managing Director ဖြစ်သူ Suphin Mechuchep နှင့် Transform Architecture (Vietnam) မှ Managing Director ဖြစ်သူ Thien Duong က ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
၁၅ ကြိမ်မြောက် PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final နောက်ဆုံးအဆင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးကို Platinum Sponsor အဖြစ် Kohler ၊ တရားဝင်လေကြောင်းလိုင်းမိတ်ဖက်အဖြစ် Thai Airways ၊ တရားဝင် Portal မိတ်ဖက်အဖြစ် PropertyGuru ၊ တရားဝင်မဂ္ဂဇင်းအဖြစ် PropertyGuru Property Report ၊ တရားဝင် PR မိတ်ဖက်အဖြစ် Artemis Associates ၊ တရားဝင်လူမှုရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်အဖြစ် Right to Play ၊ တရားဝင် ESG မိတ်ဖက် အဖြစ် Baan Dek Foundation နှင့် တရားဝင်ကြီးကြပ်သူ အဖြစ် BDO တို့က ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 4, 2020 နေ့
ကလေးတွေအတွက် အိပ်ခန်းကို အလှဆင်ရတာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေအတွက်ကတော့ အခန်းထဲမှာ အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေထပ်ဖြည့်ပြီး ပိုလှအောင် လုပ်လိုက်ရင် ကလေးအိပ်ခန်းဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ကိုယ့်နေအိမ်မှာတော့ ကလေးရဲ့ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးကိုလည်း မှေးမှိန်မသွားစေရဘဲ ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းထားဖို့အတွက်နေရာ၊ ကိုယ့်ကလေးကြီးလာတဲ့အခါ အသုံးဝင်မယ့်ပစ္စည်းတွေအတွက်နေရာစသည်ဖြင့် လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားဖို့ လိုလာပါပြီ။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်(၅)ချက်ကတော့ ကိုယ့်အိမ်က သာမာန်ကလေးအိပ်ခန်းကို နတ်ရေကန်ထဲကနေ ဝုန်းခနဲ ပြန်ထွက်လာသလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် လှပစွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးအိပ်ခန်းအဖြစ် မုချပြောင်းလဲပေးပစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။
ကလေးအိပ်ခန်းကို အလှဆင်တဲ့အခါ အခန်းရဲ့ အပြင်အဆင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အပြင် လက်တွေ့မှာလည်း အသုံးဝင်စေမယ့် အိပ်ရာကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့က ပထမဆုံးချရမယ့် အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ ကလေးအိပ်ခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သိပ်လည်းရိုးရှင်းသွားနိုင်သလို ကူရှင်စွပ်အုံးတားတွေ၊ လိုက်ကာတပ်လို့ရတဲ့ ခြေတံရှည်ကုတင်တွေနဲ့ တခြားဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ပစ္စည်းလေးတွေပါ၀င်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့လည်း ထပ်ပြီး အသေးစိတ်မွမ်းမံပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
ကလေးတွေများတဲ့အခါ ဒီလိုအိပ်ခန်းထဲမှာ မွေ့ရာအကြီးကြီးတွေမထားရအောင်၊ ကလေးတွေလည်း ဧည့်ခန်းထဲထွက်မအိပ်ရလေအောင် အတွဲလိုက် နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် တစ်ခုထားပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်တွေကိုဆက်ပြီး ကုတင်ကျယ်ကြီးအဖြစ် ဖန်တီးယူလို့ ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလို့ ကလေးတွေ ကိုယ့်အိမ်ထောင်နဲ့ကိုယ် ထူထောင်သွားကြတဲ့အခါ ဒီအခန်းကို ဧည့်သည်ထားဖို့ အခန်းအဖြစ် အလွယ်တကူ ပြန်လည်ပစ်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ယာခင်းက ကလေးအိပ်ခန်းမှာ နောက်ထပ်အလွှာတစ်ုခကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါဟာ ကြီးကြီးမားမားလုပ်ဆောင်ရခြင်းမရှိဘဲ အချို့သောအရောင်၊ အထည်သားနဲ့ ဆန်းပြားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပေါ်လွင်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။
တစ်နှစ်ပတ်လုံး အိပ်ခန်းအသွင်အပြင်ကို ရိုးမသွားစေရအောင် အဆင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အိပ်ရာခင်းတွေကို အဆင်သင့်ဝယ်ဆောင်ထားပြီး အမြဲတမ်းလဲလှယ်ပေးနေပါ။
နံရံကပ်အိပ်စင်တွေက အခန်းအတွင်းမှာ နေရာယူသက်သာတဲ့အပြင် အခန်းထဲမှာ ကလေးလေးတွေ အများကြီးကို သိပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ကလေးတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် ဆေးအရောင်တွေနဲ့ အမျိုးမျိုးသော နံရံကပ်သစ်သား အိပ်စင်တွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဘယ်လို အရောင်မျိုးပဲ ရွေးချယ်မိခဲ့ပါစေ အဆင်ပြေနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ကလေးအိပ်ခန်းကို ပြင်ဆင်တဲ့အခါ အဓိက အလေးထားစဉ်းစားရမယ့် အရာတစ်ခုက အခန်းရဲ့ အရောင်ပါ။ ကလေးအိပ်ခန်းအတွက် အရောင်ကို ကလေးတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ခိုင်းတာက အိပ်ခန်းဒီဇိုင်းအတွက် စဉ်းစားရာမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်နိုင်သလို သူတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းသစ်လေးကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ခန်းအရောင် ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်အကင်းဆုံးကတော့ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အရောင်တွေကို စတင်ရွေးချယ်တာပါပဲ။ ဥပမာ – အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ အရောင်တစ်မျိုး၊ နှစ်မျိုးလောက် စပြီး ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါပြီ။ အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ အရောင်နှစ်မျိုးကို အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေမပြေဆိုတာ သိချင်ရင် အလွယ်ဆုံးကတော့ တခြားအခန်းတွေကို လိုက်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။ အွန်လိုင်းပေါ်က အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံတွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး ဘယ်ဟာကတော့ဖြင့် ကြည့်လို့ကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာကတော့ဖြင့် ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပ်မကြာခင် ဆုံးဖြတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပညာရှင်များရဲ့ အကြံပေးမှုများအတိုင်း ကလေးတို့ရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို ပြင်ဆင်ပေးပြီး ကလေးအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်တွေကို ဖန်တီးပေးလိုက်တော့နော်၊ ယခုဆောင်းပါးကို Myanmar Home & Décor Magazine နှင့်အတူ Fortune Era Design & Decoration မှ စီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါသည်။ အပတ်စဉ် ရတနာလေးတို့အတွက် အိမ်အလှဆင်ခြင်းအကြောင်းကို တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါနော်…
Address: 5/46 (A2), Aung Zeya Street, (Via Kone Myint Yeik Thar Road), Mayangone Township, Yangon, Myanmar.